Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:युएसबी मिनी ह्यूमिडिफायर,नेतृत्व युएसबी ह्यूमिडिफायर,पोर्टेबल ह्यूमिडिफायर युएसबी
Home > उत्पादनहरू > Mini Humidifier > रंगीन लेड नाइट लाइट पोर्टेबल यूएसबी मिनी ह्युमिडिफायर
USD 7.54 - 8.46 / Piece/Pieces
टोकरीमा थप्नुहोस् च्याट अब
मोडेल संख्या: DT-1629V
रंगीन रातको प्रकाश पोर्टेबल USB मिनी humidifier नेतृत्व
अद्वितीय डिजाइन: क्लासिक काठ अनाज समाप्त संग, तपाईंको कोठालाई एक ताजा, स्वच्छ गन्ध दिनको लागि तपाईंको मनपर्ने आवश्यक तेलको थोप्लाहरू थप्नुहोस्। यो तपाईंको सुन्दर सुगन्धले भरिने छ। सजावटको टुक्राको रूपमा काठ अनाज विसारक, तपाईंको कोठा, कार्यालय, योग कोठा, होटल कोठा आदिको लागि उपयुक्त।
So मिनी डिफ्यूजरको सुखद एलईडी लाइट: र color साइकल गर्न वा यसलाई एक निश्चित रंगमा सेट गर्न सकिन्छ। प्रत्येक र colorमा दुई प्रकाश विकल्पहरू हुन्छन्: मधुरो र उज्यालो। seconds सेकेन्डको लागि बटन थिच्नुहोस्, लाइट अफ गर्नुहोस्। नरम प्रकाशले शान्त र रोमान्टिक वातावरण सिर्जना गर्दछ।
सुपर शान्त: अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी अपनाईएको छ, काम गर्ने क्रममा अल्ट्रासोनिक विसारक एकदम शान्त हुन्छ। यसले अल्ट्रा राम्रो र चिल्लो धुवाँ दिन्छ जसले जाडोमा सुक्खा र चाँडो छाला नरम र ओसिलो बनाउन सक्छ। यसले तपाईंलाई राम्रो सास फेर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईं एयर कंडीशनरको साथ सुतिरहनुभएको छ।
ठूलो धुवाँ आउटपुट: यो यूएसबी विसारकले 80० एमएल पानी लिन सक्दछ र प्रति घण्टा १ 15-२5 मिलिमिटरसम्म ओस उत्पादन गर्न सक्दछ। यो लगातार of घण्टा लगातार आउटपुटमा चल्दछ।
पानीविहीन अटो शट-अफ प्रकार्य: लामो समयको लागि पर्याप्त सहजता प्रदान गर्दै। जब तपाईं निदाइरहनुभएको छ वा बाहिर, घर डिफ्युजर स्वत: शट अफ हुन्छ यदि पानी बाहिर जान्छ भने। प्रकाशको पानी बन्द भए पछि पानीको ट्या if्कीमा पानी छ भने पनि सेटिंग समय सकिएको छ र प्रकाश मात्र बन्द हुन्छ यदि त्यहाँ छ भने पानी छैन।
अल्ट्रासोनिक अरोमा ह्यूमिडिफायर तस्वीरहरू:
अत्यावश्यक तेल ह्यूमिडिफायर अपरेशन:
शीत धुन्ध ह्युमिडिफायर अनुप्रयोग:
This. यो एक अत्यावश्यक तेल विसारक हो, तर तपाईं पनि एक humidifier को रूप मा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई चाहनुहुन्छ भने।
उत्पादन कोटीहरू : Mini Humidifier
होटल कोठामा न्यानो लाइट रेजिन ह्युमिडिफायर
उच्च गुणवत्ता रंगीन ग्लास आवश्यक तेल सुगन्ध विसारक
अपग्रेड गरिएको बाँस एरोमाथेरापी आवश्यक तेल विसारक
उत्तम यूएसबी अरोमा आवश्यक तेल नेबुलिजिंग विसारक
सजावटी नाइट लाइट एयर डिफ्यूजर ह्युमिडिफायर पोर्टेबल
मिनी वुड गेन अल्ट्रासोनिक अरोमा एयर ह्यूमिडिफायर
टिकाऊ मिनी अल्ट्रासोनिक आवश्यक तेल कार ह्यूमिडिफायर
कार मिनी पानी अभाव पावर अफको लागि एयर ह्यूमिडिफायर
मिनी अरोमाथेरापी कार अल्ट्रासोनिक अरोमा ह्यूमिडिफायर
युएसबी मिनी ह्यूमिडिफायर
नेतृत्व युएसबी ह्यूमिडिफायर
पोर्टेबल ह्यूमिडिफायर युएसबी